MODA | Article Detail | နယူးယောက်ခ်ဖက်ရှင်လမ်းမထက်မှ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် အပိုင်းအစ ၁၁ ခု
နယူးယောက်ခ်ဖက်ရှင်လမ်းမထက်မှ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် အပိုင်းအစ ၁၁ ခု
by Ki Ki January
နယူးယောက်ခ်ဖက်ရှင်လမ်းမထက်မှ ဒီဇိုင်းများဟာ ကျွန်မတို့အားလုံးကို အမြဲတမ်း ရင်ခုန်စရာအဖြစ်အပျက်တွေကို ပြုလုပ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်မခိုင်းနှိုင်းလိုက်တာ အရမ်း တရားလွန်သွားသလား။ ဖက်ရှင်ချစ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီလိုခံစားချက်မျိုးကို နားလည်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဒီဇိုင်းများကို မကြာခင်ကျင်းပမယ့် ကော်ဇော်နီပွဲများထက်မှ ဆယ်လီများဆီမှာ ပြန်တွေ့လေ့ရှိတာကြောင့် ဒီလိုဖက်ရှင်ပွဲတွေကနေ အနုပညာရှင်များနောက်ပွဲမှာ ဘယ်လို၀တ်စားနိုင်သလဲဆိုတာကိုပါ ခန့်မှန်းသိနိုင်ပါတယ်။
ခုပြောပြမယ့်ဒီဇိုင်းများက မကြာသေးခင်ကမှ ကျင်းပပြီးသွားတဲ့ New York Fashion Week မှာ ပြသအောင်မြင်မှုအများစဆုံးရခဲ့တဲ့ဒီဇိုင်းများဖြစ်ပါတယ်။ နယူးယောက်ခ်ဒီဇိုင်းများဆိုတဲ့အတိုင်း ဒီဇိုင်းထည်များမှာ လင်းလင်းလက်လက်၊ ပျိုးပျိုးပြက်ပြက်၊ အရောင်တောက်တောက်တွေကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပြီး ဝတ်ဆင်လျှောက်ပြခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်တစ်ဦးချင်းဆီကနေ နယူးယောက်ခ်ရဲ့ အငွေ့အသက်တွေကို ခံစားရပါတယ်။ သူတို့တွေက ခေတ်ဆန်ခြင်းကို တော်ဝင်ဆန်ခြင်းနဲ့ တွဲစပ်ထားတယ်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်းကို နူးညံ့စွာ နှစ်လိုဖွယ်ရှိခြင်းနဲ့ ဖော်ပြထားတယ်။ ဂါဝန်ရှည် တစ်ထည်ချင်းစီမှာ မတူညီတဲ့ခံစားချက်တွေ၊ မတူညီတဲ့တင်ပြခြင်းတွေကြောင့် ခုပြောပြမယ့် အပိုင်းအစ ၁၁ ခုသည် အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးတွေထဲကမှ ရွေးထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါတွေကလည်းကာကွယ်ပေးသလိုဖက်ရှင်လည်းကျတဲ့ Cotton Mask တွေကို ဘယ်မှာ ဝယ်ယူကြမလဲ
အပြင်ထွက်ရင်လည်း အထာကျကျ Mask တပ်ပါ
Covid-19 ကြောင့် အားလုံးအိမ်မှာနေကြရပေမယ့် မဖြစ်မနေ အလုပ်သွားရမယ့်အချိန်တွေ၊ အပြင်ထွက်ရမယ့် အချိန်တွေဆိုရင်တော့ Face Mask ကမဖြစ်မနေတပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံလည်း ဒီကပ်ရောဂါကြီးကြောင့် လူနေမှု Lifestyle တွေပါပြောင်းလဲလာသလို ဘယ်တော့မှ ကာကွယ်ဆေးပေါ်ပြီး ပျောက်ကင်းမယ်ဆိုတာလည်း မသိနိုင်တာမို့ New Normal ဆိုတဲ့ အခြေအနေမှာလည်း ကောင်းကောင်း Adapt လုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြရမှာပါ။
အခု Market ထဲမှာလည်း Mask အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိတာမို့ နှစ်သက်ရာကို လက်တစ်ကမ်းမှာ ဝယ်ယူနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နေ့စဉ်သွားလာလှုပ်ရှားရတဲ့ အချိန်မျိုးမှာကျ ပေါ့ပါးတဲ့ Cotton Mask လေးတွေက Surgical Mask၊ N95 Mask တွေထက် ပိုအဆင်ပြေပြီး ပြန်လျှော်ပြီးသုံးလို့ရတာမို့ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်း Sustainable ဖြစ်တဲ့ Mask လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ Cotton Mask လေးတွေက မိမိနှစ်သက်ရာ ချည်သားအစကို ချုပ်ပြီး တပ်လို့ရသလို Market ထဲမှာ လည်း ဖက်ရှင်ကျတဲ့ Pattern လှလှ Cotton Mask တွေအများကြီးထွက်ရှိနေပြီးသားမို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ Cotton Mask လှလှလေးတွေလိုချင်ပေမယ့် ဘယ်မှာဝယ်ရမှန်းမသိရင် Quality ကောင်းတဲ့ အမိုက်စား Cotton Mask ရောင်းတဲ့ Brand လေးတွေကို ရွေးချယ်ပြီး စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အားလုံးလည်း အခုလို အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကောင်းဆုံးကာကွယ်ပြီး Mask လေးတွေတပ်ကြမယ်နော်။
အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ လူငယ် Designer လေး Ydn Naing Win ကလည်း အမိုက်စား Face Mask လေးတွေကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြန်ပါပြီ။ ကိုယ်တိုင် Adjust လုပ်ပြီး ချည်လို့ရတဲ့ Strap နဲ့ Mask တွေရော၊ Elastic Bands နဲ့ Mask တွေရောရရှိနိုင်တာမို့ Mask တပ်ထားရင်တောင်မိမိုက်နေမှာသေချာပါတယ်။
ဖက်ရှင်ကျကျ Mask တွေကိုမှ တပ်ချင်သူတွေအတွက် Supernova2020 က Mask တွေက ကွက်တိပါပဲ။ နှစ်ဖက်လှ (Two Sided) လည်းဖြစ်သလို ကာလာ Pattern တွေကလည်း အများကြီးပဲဆိုတော့ Mask ဝတ်ပြီးလည်း Style ကျနိုင်ပြီပေါ့။
Shop now at https://www.facebook.com/SupernovaByJayy/
Tytenium Brand မှာ Face Mask တွေကို Collection လိုက်ကို အရောင်ရော၊ ဒီဇိုင်းရောရွေးချယ်နိုင်သလို Double Sided ဖြစ်တာမို့ Style နှစ်မျိုးလည်း ဝတ်လို့ရတော့ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ပိုပြီး Safe ဖြစ်ချင်ရင် အထဲက အဝတ်ထပ်ခံလို့ရတဲ့ Filter Pocket Mask လေးတွေလည်းရှိပါတယ်။
Shop now at https://www.facebook.com/tytenium/
Myanmar Glam Couture
အမျိုးသမီးများအတွက် ကျက်သရေရှိပြီး Glamorous ဖြစ်တဲ့ ဖက်ရှင်တွေကိုအမြဲချုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ Myanmar Glam Couture ကလည်း Quality Fabric နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ Colorful Face Mask လေးတွေကို ရောင်းချပေးနေပါတယ်။
Shop now at https://www.facebook.com/MyanmarGlamCouture/
အမျိုးသားတွေအကြိုက် High Cultured Myanmar ကနေလည်း Cotton သားထူထူနဲ့ လုံခြုံတဲ့ Face Mask လေးတွေကို မှာယူနိုင်ပါပြီ။ Minimalist ဆန်ဆန် Plain Mask လေးတွေမို့ ဘယ်သွားသွားသင့်တော်ပါတယ်။
Shop Now at https://www.facebook.com/highculturedmm/
ချည်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ Bags တွေနဲ့ Accessories တွေနဲ့ လူသိများပြီးသားဖြစ်တဲ့ Cotton Concept ကနေလည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Cartoon လေးတွေ၊ Print လေးတွေနဲ့ Cotton Mask လေးတွေကို ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Shop now at https://www.facebook.com/CottonConcept-906257929418438/
Traditonal Cotton Fabric တွေကို Unique ဖြစ်တဲ့ Fashion Design လေးတွေနဲ့ရောင်းချနေတဲ့ Urban Rangoon ကလည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ဝါးချည်၊ သဘာဝဆိုးဆေးချည်စလေးတွေနဲ့ချုပ်လုပ်ထားတဲ့ Washable Bamboo Cotton Mask တွေကို ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
Shop now at https://www.facebook.com/urbanrangoon/
Photo credits to original uploaders.
အိမ်မှာနေရင်း ကမ္ဘာကျော် Met Gala ၀တ်စုံတွေကို တုပဖန်တီးခဲ့ကြတဲ့ ချစ်စရာ Challenge လေး
မြန်မာပြည်က Met Gala ပရိသတ်တွေရော အဲဒီလို Challenge မျိုးလေးလုပ်မကြည့်ချင်ကြဘူးလား
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပနေကျဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာကျော်အခမ်းအနားကြီး Met Gala ဟာဆိုရင် ဒီနှစ်မှာတော့ Corona ရောဂါကြောင့် ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ရွှေ့ဆိုင်းထားခဲ့ရတာ အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်မရိုးရအောင် ၀တ်ဆင်ပွဲတက်ရောက်လာကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ရင်သပ်ရှူမောဖွယ်ရာ၀တ်စုံတွေကလည်း လက်လွတ်မခံတမ်းစောင့်ကြည့်ချင်လောက်အောင်ကို အပြိုင်အဆိုင်ထူးခြားဆန်းသစ်နေကြတာမဟုတ်ပါလား။ ဒီနှစ်မှာတော့ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ ပွဲကြီးကိုမကျင်းပဖြစ်ပေမယ့် Met gala ကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ အိမ်မှာနေရင်း Met gala မှာ ၀တ်ဆင်ခဲ့ကြတဲ့ Celebrity တွေရဲ့၀တ်စုံတွေကို ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပြန်လည်တုပပုံဖော်ရင်း Met Gala Challenge ဆိုတာကို ဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။ Quarantine ကာလမှာ အပျင်းလည်းပြေ စိတ်၀င်စားစရာလည်းကောင်းတဲ့ challengeလေးတွေကိုဖန်တီးခဲ့ကြတဲ့အထဲကမှ ဒီ challengeလေးကတော့ တကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းပြီး ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရမှာပါပဲ။ မြန်မာပြည်ကပရိသတ်တွေကရော stay home ရင်း အဲဒီလိုပျော်စရာ ဖန်တီးမှူလေးတွေ လုပ်မကြည့်ချင်ကြဘူးလား။
Rihanna (Metgala 2018)
Rihanna ရဲ့ 2018 met gala မှာ ၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ အမိုက်စား red carpet look ကိုအားလုံးမှတ်မိကြမှာပါ။ Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination ဆိုတဲ့ Theme အောက်မှာ ပုပ်ရဟန်းတစ်ပါး ရဲ့ ၀တ်စုံကို inspired ပြုလုပ်၀တ်ဆင်လာခဲ့တဲ့ ပုလဲနဲ့ ကျောက်တွေအပြည့်စီခြယ်ထားတဲ့လှပတဲ့ Dress တစ်ခု ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို Sanja Nestorovic ဆိုတဲ့ Instagrammer တစ်ယောက်က Metgala challenge ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ သတင်းစာစက္ကူတွေကိုသာသုံးပြီး အပျော်အနေနဲ့ ပြန်လည်ဖန်တီး၀တ်ဆင်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ Challengeလေးမှာ Quarantine Couture ,Corona Carpet ဆိုတဲ့ ခပ်မြူးမြူး hashtag လေးတွေကိုလည်း အသုံးပြုသွားခဲ့ပါသေးတယ်။
Beyonce (Metgala 2015)
Plastique Pussey ဆိုတဲ့ Dragqueen တစ်ဦးကတော့ သူအရမ်းသဘောကျရတဲ့ Beyonce ရဲ့ 2015 Metgala က ၀တ်စုံကို ပုံစံတူလုပ်ပြီး Metgala Challengeအနေနဲ့ ပြန်လည်ဖန်တီး၀တ်ဆင်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ၀တ်စုံမှာ ဖန်စီကျောက် အရွယ်အစားစုံ ဒီဇိုင်းစုံပေါင်း 15 ပေါင်ခန့်ကို အသုံးပြုပြီးဖန်တီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ၀တ်စုံကတော့ တော်တော်လေးကိုနီးနီးစပ်စပ်တူတယ်လို့ပြောရမှာပါပဲ။
Katy Perry (Metgala 2019)
N.V stylist ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလည်း Katy Perry ရဲ့ 2019 ခုနှစ်က၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ထူးထူးခြားခြား နာမည်ကျော် Met Gala ၀တ်စုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Chandelier ၀တ်စုံကြီးကို တစ်ပုံစံတည်းတုပဖန်တီးပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့ သူ့အိမ်က မီးဆိုင်းအစစ်ကြီး‌အောက်မှာသွားရပ်ပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာပါ။ ခက်ခက်ခဲခဲကြီးမဟုတ်ပေမယ့် တစ်ပုံစံတည်းတော့တူနေတယ်မဟုတ်လား။
Jared Leto (Metgala 2019)
Metgala 2019 တုန်းက Jared Leto ၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ထူးထူးခြားခြား ရုပ်တူခေါင်းတစ်လုံးကိုပိုက်လာတဲ့ Gucci ၀တ်စုံကြီးကို အားလုံးသတိထားမိကြမှာပါ။ အဲဒီ၀တ်စုံနဲ့ ပုံစံတူဖန်တီးမှူကိုတော့ Sarahmshourds ဆိုတဲ့ Instagram အကောင့်ပိုင်ရှင်မိန်းကလေးက သူ့ရဲ့ Instagram မှာ Metgala Challengeအနေနဲ့ ဖန်တီးပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမလက်ထဲမှာပိုက်ထားတာကတော့ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်တွေမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ အရုပ်မခေါင်းကြီးပါ။တော်တော်လည်းပေါက်ပေါက်ရှာရှာ တွေးတတ်တယ်ဆိုရမှာပါပဲ။
Kylie Jenner (Metgala 2019)
ခု Challengeမှာပါ၀င်သူလေးကတော့ချစ်စရာလေးပါ။ Kylie Jennerနဲ့ Metgala Dress ကို ပုံစံတုပဖန်တီးဖို့အတွက် သူ့အမေရဲ့ စကတ်အရှည်ကို ရောင်စကတ်အကားလေးနဲ့တွဲချုပ်ပြီးပုံစံတူဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ပုဝါစကတော့သူ့အမေ ဟောလိုး၀င်းပွဲတုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ ပုဝါလေးပါတဲ့ ။ကြည့်ရတာ ချစ်ဖို့ကောင်းမနေဘူးလား‌။
Priyanka Chopra (Met gala 2019)
ခုနောက်ဆုံး Challenge ပိုင်ရှင်လေးကတော့ ချစ်စရာကောင်းတာထက်ကိုလွန်သွားပါပီ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Pawsofwinterfell ဆိုတဲ့ Instagram အကောင့်ပိုင်ရှင်ကြောင်လေးတစ်ကောင်ဖြစ်နေလို့ပါ။ ပါရှန်းကြောင်လေးတွေအများစုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ စူပုတ်ပုတ်မျက်နှာလေးမှာ Metgala 2019 က Priyanka ၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ပုံစံလေးအတိုင်းတွဲဖက်ပြီးမြင်တွေ့ရတာဟာ မြင်ရသူတိုင်းကို ပြုံး‌မိစေမှာအသေအချာပါပဲ။ ဒီပုံရိုက်ဖို့ကိုတော့ ဒီကလေးကို သူ့သခင်က တော်တော်မျက်နှာလုပ်လိုက်ရမယ့်ပုံပါပဲ။ သူ့ Instagramထဲမှာလည်း တခြား Metgala Challenge ပုံတွေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်။
#Stay Home Challenge
#Met Gala Challenge
MODA 101 Program ရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး Iconic Episode များကို ပြန်လည် ကြည့်ရှုခံစားကြည့်ရအောင်
ဘယ် Episode က Topic ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲ
သင်ကတကယ်လို့ MODA Fan ဆိုရင်တော့ MODA101 Program တွေကို ရင်းနှီးပြီးသားသူဖြစ်မှာပါ။ အားလုံးအတွက် Fashion၊ Beauty ၊ Lifestyle နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတရဖွယ် အကြောင်းအရာမျိုးစုံကို အနုပညာရှင်များ၊ Celebrity များ၊ Influencer များနဲ့အတူ စကားလက်စုံပြောကြတဲ့ Talk Show လေးကို အားလုံးပဲ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြလိမ့်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ်။
Fashion၊ Beauty နဲ့ Lifestyle နဲ့ပတ်သတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲလား။ မဟုတ်ဘူးနော်။ လတ်တလော Hot ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေ၊ Trendy ဖြစ်နေတဲ့ Topic တွေအကုန်လုံးကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းအောင် တင်ဆက်ထားတဲ့ Program လေးပါ။ အချိန်အားဖြင့်လည်း Episode တစ်ခုကို ၁၀ မိနစ်ဝန်းကျင်ပဲကြာတာဆိုတော့ အချိန်လည်း အများကြီးမပေးရပဲ Entertaining လည်းဖြစ်စလို ဗဟုသုတတွေလည်း အများကြီးရစေပါတယ်။
MODA 101 Episode တွေထဲကမှ လူကြိုက်အများဆုံးနဲ့ Hot အဖြစ်ဆုံး Episode လေးသုံးခုကို Editor က Selection အဖြစ်ပြန်လည်ရွေးချယ်ပြီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ Episode လေးသုံးခုက ဘယ်ဟာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ အခုပဲကြည့်လိုက်တော့နော်။
ဒီထက်အမိုက်စား Fashionable Video တွေ၊ စိတ်ဝင်စားစရာ Creation တွေနဲ့ Video Content တွေကို မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ MODA. TV Myanmar ကိုလည်း Youtube မှာ Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။
Episode9| Ladies Underwear
ဒီ Episode လေးကတော့ မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Episode လေးပါ။ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ မရှိမဖြစ်ဖြစ်တဲ့ Underwear တွေအကြောင်း၊ မိမိတို့ဝတ်ဆင်လိုက်တဲ့ အတွင်းခံတွေက ဖက်ရှင်အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိကြောင်း၊ ဝတ်ဆင်မယ့် Occasion နဲ့ နေရာဒေသအပေါ်မူတည်ပြီးရွေးချယ်သင့်တဲ့ Bra နဲ့ Panties တွေအကြောင်းကို Stylist Collin ကအသေးစိတ်ပြောပြထားပြီး Guest အနေနဲ့ စူပါမော်ဒယ် Shwe Eain Si နဲ့ Dee တို့က Feature လုပ်ထားတာမို့ လက်မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုသင့်တဲ့ Episode လေးပါပဲ။
Episode 12 | Perfume Collection
Kyaw Htet Aung နဲ့ Mya Hnin Yee Lwin တို့ ပါဝင်ထားတဲ့ Episode လေးဖြစ်ပြီး အလှအပနဲ့ ရေမွှေးတွေကို Crazy ဖြစ်သူတွေအဖို့ သူတို့ပြောတဲ့ Topic ကိုအကြိုက်တွေ့မှာသေချာပါတယ်။ Kyaw Htet Aung၊ Mya Hnin Yee Lwin နဲ့ MODA Co-Producer Dong Dong တို့ရဲ့ Favourite ဖြစ်တဲ့ Perfume/Fragrance တွေအကြောင်း၊ Perfume အမျိုးအစားတွေအကြောင်းနဲ့ Perfume တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရတွေအကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားစရာစုံစုံလင်လင်တင်ပြထားတဲ့ Episode လေးပါ။
Episode 11 | Fashion Challenge
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ညီအစ်မနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ May နဲ့ Thuzar တို့ ပါဝင်ထားတဲ့ ဒီ Episode မှာတော့ Fun ဖြစ်တဲ့ Outfit Challenge လေးတွေလည်းပါဝင်ထားတာမို့ထူးခြားပါတယ်။ Fashion ကိုစိတ်ဝင်စားသူတိုင်း မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုသင့်ပြီး သူတို့တွေဆွေးနွေးထားတဲ့ Topic လေးကလည်း လက်ရှိ လူငယ်တွေကြားမှာ Sensitive Topic ဖြစ်တဲ့ မိမိချစ်သူကို စနိုက်ကျော်ချင်တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါ၊ မိမိချစ်သူရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားတွေတဲ့အခါ Fashion ကိုဘယ်လို မိုက်အောင်ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့ Topic မို့စိတ်ဝင်စားကြမှာပါ။ May တို့ညီအစ်မနှစ်ယောက်ကလည်း တက်ညီလက်ညီ ပါဝင်အားဖြည့်ထားတာမို့ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။
မေမေ့အတွက် အသုံးလည်း၀င်၊ဖက်ရှင်လည်းကျစေမယ့် Mother's Day အမှတ်တရ လက်ဆောင်များ
အမေများနေ့အတွက် ဘာလက်ဆောင်တွေ စဉ်းစားထားပြီးပြီလဲ
မိဘဆိုတာဟာ ဘ၀ရဲ့ အကြီးမြတ်ဆုံးသော ကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်တဲ့အလျောက် အမေဆိုတာဟာလည်း အခမ်းနားဆုံးသော မေတ္တာတရားတွေရဲ့ပြယုဂ်တစ်ခုပါ။ဒါကြောင့်မို့လည်း အမေတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး အမေများနေ့ရယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရက်စွဲတစ်ခုဟာ ပြက္ခဒိန်ထဲမှာ တစ်သီးတစ်သန့် နေရာယူထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနေ့ထူးနေ့မြတ်မျိုးမှာ နိုင်ငံတိုင်း၊ လူမျိုးတိုင်း၊ဘာသာတရားတိုင်းဟာ ကိုယ့်မိခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတရားတွေကို သိတတ်သောအားဖြင့် လက်ဆောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ အသိအမှတ်ပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ လက်ဆောင်ရဲ့တန်ဖိုးကြီးခြင်းမကြီးခြင်းထက် သားသမီးတွေရဲ့ သိတတ်ခြင်းဆိုတဲ့ အရာတစ်ခုကပဲ မိဘတွေကိုပိုပြီး ပီတိဖြစ်စေတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုနေ့ထူးနေ့မြတ်မျိုးမှာ သားသမီးတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့အနေအထားအလိုက် ကိုယ့်ရဲ့လုပ်အားနဲ့ စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးထဲကနေပြီး မိခင်အတွက်အကောင်းဆုံးဆိုတာတွေကိုမှ လက်ဆောင်ပေးချင်၊ကန်တော့ချင်ကြပါတယ်။ စုဆောင်းထားတဲ့‌ချွေးနည်းစာနဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံးတွေကို လက်ဆောင် ပေးဖို့စဉ်းစားရတဲ့အခါမှာ အကောင်းဆုံးကိုလည်းပေးချင် အသုံးမတည့်ဖြစ်မှာကိုလည်း စိုးရိမ်ပြီး ဘာ‌လက်ဆောင်ပေးရမလဲဆိုတာ‌ ခေါင်းစားကြရစမြဲပါ ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဘယ်လိုလက်ဆောင်မျိုးတွေကများ အမှန်တကယ်အသုံးလည်း၀င်ပြီး မေမေတို့အတွက် နှစ်သက်သဘောကျစေမယ့် လက်ဆောင်လေးတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကို
သိရအောင် တစ်ခုချင်းစီ လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
လက်ကိုင်အိတ်ဆိုတာကတော့ ကြီးကြီးငယ်ငယ် အရွယ်သုံးပါးမရွေး ကျေကျေနပ်နပ်ကိုလက်ခံယူကြမယ့် ပစ္စည်းတစ်မျိုးပါ။ ဒါပေမဲ့ လူကြီးပိုင်းကို ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ မေမေတို့အနေနဲ့ အလှူပွဲလမ်းသဘင်သွားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ အပြင်သွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ကိုင်အိတ်ကောင်းကောင်းတစ်လုံးကို လိုလိုလားလား ၊နှစ်နှစ်သက်သက် ကိုင်တွယ်သုံးစွဲတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အမေများနေ့အတွက် ထည့်ပြီးစဉ်းစားသင့်တဲ့လက်ဆောင်တွေထဲမှာ လက်ကိုင်အိတ်တစ်လုံးဟာလည်း မေမေတို့အတွက် သုံးကိုအသုံး၀င်မယ့် လက်ဆောင်တစ်ခုပါပဲ။
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် Link - D&C Myanmar Women Leather Handbags
PrettyFIT Women Leather Handbags
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် Link - Pretty Fit Women Leather Handbags
နာရီဆိုတာဟာ သက်ကြီးပိုင်း၊သက်လတ်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့လက်စွဲလည်းဖြစ်သလို အသုံးလည်း၀င်၊ ပွဲလည်းတိုးစေတဲ့ တန်ဖိုးရှိအဆင်တန်ဆာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။နာရီကောင်းကောင်းတစ်လုံးဟာ လက်၀တ်ရတနာတစ်ခု၀တ်ဆင်ထားသလိုပဲ ကျက်သရေရှိပြီး တင့်တယ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အမေများနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ နာရီလှလှလေးတစ်လုံးကိုလက်ဆောင်ပေးပြီး မေမေ့ရဲ့ကျေနပ်ပီတိအပြုံးကို အရယူနိုင်ပါစေ။
DANIEL KLEIN Golden Series Lady Watch
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် Link - DANIEL KLEIN Golden Series Lady Watch
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် Link - Alexandre Christie Women Watch
လည်စည်းပုဝါကတော့ ‌နေရောင်ကာဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ချွေးပဲသုတ်သုတ် ၊ဘုရား၀တ်ပြုတဲ့အခါမှာပဲခင်းခင်း ၊ခရီးသွားတဲ့အခါ အလှပဲစည်းစည်း လူကြီးတွေအနေနဲ့ တမြတ်တနိုး အသုံးပြုတတ်ကြတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဘက်စုံအနေနဲ့အသုံး၀င်တဲ့ လည်စည်းပုဝါလေးဟာ‌လည်း အမေများနေ့အတွက်မေ့မထားသင့်တဲ့ လက်ဆောင်တွေထဲကတစ်ခုပါပဲ။
FABRIX: Women's Fashionable Scarf (Bagan Couple Dance Design)
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် Link - FABRIX: Women's Fashionable Scarf ( Bagan Couple Dance Design)
ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိုး‌ဥတုလိုအချိန်အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ရာသီဥတုဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးဖို့အတွက် ထီးဆိုတာဟာ မရှိမဖြစ်အသုံး၀င်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် နေကလည်းပူပြင်းလွန်းသလို မကြာခင်မှာလည်း မိုးရာသီကိုရောက်ရှိတော့မှာမို့ ကိုယ့်မိခင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စား တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မယ့် ထီးလှလှလေးတစ်လက်ကလည်း အကောင်းဆုံးသော လက်ဆောင်လေးတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။
Auto-Big Square EAGLE FORCE
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် Link - Auto-Big Square EAGLE FORCE
ရေမွှေးဆိုတာဟာ အနံ့အာရုံအားဖြင့် ကျက်သရေရှိခြင်းကိုဆောင်ပြီး လူပုံအလည်မှာတင့်တယ်စေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း လူကြီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်ကိစ္စပဲစကားပြောပြော၊ အလှူမင်္ဂလာပွဲလမ်းသဘင်ပဲသွားသွား ရေမွှေးကောင်းကောင်းလေးဆွတ်ဖို့ကို တခုတ်တရမျှော်လင့်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကိုယ့်ရဲ့မိခင်အတွက် အလိုက်ဖက်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ့် မွှေးရနံ့လေးတစ်ခုကို လက်ဆောင်ပေးဖို့က လိမ္မာတဲ့သားသမီးတွေရဲ့တာ၀န်ဖြစ်သွားပါပြီ။
Beach Dreams Forever Mist 250ml
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် Link - Victoria Sectet : Beach Dreams Forever Mist
ဖိနပ် လက်ဆောင်ပေးခြင်းကို တချို့နိုင်ငံတွေမှာ မကောင်းတဲ့အယူအဆရှိကြပေမယ့် အဲဒီလိုအယူအစွဲမျိုးထက် ကိုယ့်မိဘကိုခလုတ်မထိဆူးမငြိစေလိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ဆိုရင် ဒီလိုအယူအဆတွေက ဘာမှ အရေးမပါတော့ပါဘူး။ ဖိနပ်လှလှလေးတစ်ရန်ကို တော်ရုံလူကြီးတွေက သေချာရွေးချယ်ပြီး ၀ယ်မ၀တ်ဖြစ်ကြပါဘူး။ ဖိနပ်ဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီး တော်ရုံတန်ရုံ ၀ယ်တတ်ကြပေမယ့် တကယ်တမ်း ပွဲသွားပွဲလာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊လူတောထဲသွားရတဲ့အခါ လှလှပပဖိနပ်လေးတစ်ရန်ကတော့ လိုကိုလိုလာမှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ လူငယ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကပဲ ကို‌ယ့်မေမေနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်ပြီး လှပတင့်တယ်စေမယ့်ဖိနပ်လေးတစ်ရန်ကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်တာ ပိုမကောင်းဘူးလား။ဒါပေမဲ့ မ၀ယ်ခင် မေမေ့ရဲ့‌ဖိနပ်ဆိုဒ်လေးကို သိထားဖို့တော့ လိုတယ်နော်။
Pretty Fit Lady Slide
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် Link - Pretty Fit Lady Slide
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် Link - D&C Myanmar Women Leather Shoes
လက်၀တ်ရတနာအဆင်တန်ဆာဟာလည်း လူကြီးမိဘတွေနှစ်သက်စွာဆင်မြန်းတတ်တဲ့ အရာတွေထဲတစ်ခုပါ။ ဒီဘက်ခေတ်မှာ တန်ဖိုးမြင့်တဲ့ ရွှေထည်တွေကို၀တ်ဆင်တာမျိုးထက် ကိုယ့်သုံးစွဲမယ့်ငွေပမာဏအပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်းလည်းသင့် လှလည်းလှ ‌ကိုယ့်ရဲ့မိခင်လည်းသဘောကျအကြိုက်တွေ့စေမယ့် 18k gold၊ 925၊ Silver လိုပေါ့ပေါ့ပါးပါး လက်၀တ်ရတနာမျိုးလေးတွေဟာ အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်အဖြစ်နေရာယူလာတဲ့ jewelry လေးတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အမေများနေ့မှာမေမေ့အတွက် ဘိုဆန်ဆန်လက်ဆောင်လေးကိုပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလို Fancy ဆန်ဆန် jewelry လေးတွေကိုလည်း မေ့ချန်ထားခဲ့လို့မရပါဘူးနော်။
SK JEWELS Italy Sterling Silver Necklace
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် Link - SK Jewels Italy Sterling Silver Necklace
အယ်ဒီတာ Recommand ပေးချင်တဲ့ 2020 ရဲ့ Trend အဖြစ်ဆုံး Outfit ကာလာများ
2020 ကတော့ အခက်အခဲအကျပ်အတည်းတွေကြားကနေ အကောင်းဖက်ကို ပြန်လည် ဦးတည်လာပြီလို့တော့ အားလုံးက မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ သိမ်မွေ့နူးညံ့မှု၊ အသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည် မွေးဖွားမှုတို့ကို ဖော်ညွှန်းနေတဲ့ Neutral နဲ့ Pastel ကာလာတွေက 2020 ကိုအလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံး အရောင်တွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Bold ဖြစ်တဲ့ Color Ray တွေထဲကဆိုရင်တော့ ဒီနှစ်ထဲမှာ Classic Blue နဲ့ Chilli Pepper အနီရောင်တို့ ခေတ်စားပါတယ်။
သင်ဝတ်တဲ့ အဝတ်အစားအရောင်တွေကသင့်ရဲ့ ဖက်ရှင် Sense နဲ့ Personality တွေကို ဖော်ပြနေတတ်တာမို့ သေချာ ရွေးချယ်ပြီး ဝတ်ဆင်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဝတ်တဲ့အခါမှာလည်း လူအများအမြင်မှာလည်း အရမ်းကြီးအမြင်မရိုင်းအောင်၊ ခေတ်မီပြီးဖက်ရှင်ကျ တဲ့ Trendy Pantone Color တွေထဲက Editor ကိုယ်တိုင် သဘောကျတဲ့ Color Tone လေး ငါးရောင်ကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖက်ရှင်ချစ်သူတွေလည်း သင့်ရဲ့ Closet ထဲမှာ ဒီလို Color Tone လေးတွေကိုတော့မရှိမဖြစ် ဝယ်ထားသင့်တယ်လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ အဲ့ကာလာ (၅) ရောင်ထဲက ဘယ်အရောင်လေးကရော သင့် Favourite ဖြစ်မလဲ။
Classic ဖြစ်တဲ့ Chilli Pepper Red လေးကတော့ Bold ဖြစ်တဲ့ အပြင်အဆင်တွေနဲ့ ပိုလိုက်ဖက်ပါတယ်။ ပွဲတွေအတွက်လည်း အသင့်တော်ဆုံး ကာလာဖြစ်သလို Black&White Stripe လို Pattern တွေနဲ့တွဲဖက်ရင်လည်း Chic ဖြစ်တဲ့ French Girl Look ကိုရရှိစေမှာပါ။
Iphone11 ထွက်ရှိတဲ့အချိန်ကစပြီး Trendy ဖြစ်လာတဲ့ ကာလာနှစ်ခုက Mint Leaf နဲ့ Pastel Lilac ပါ။ နူးညံ့ပြီး Playful ဖြစ်တဲ့ Mint Leaf ကို Mint Green ကာလာလို့လည်း လူသိများကြပါတယ်။ မျက်စိအေးစေတဲ့အရောင်လေးဖြစ်ပြီး Faded Jeans တွေ၊ အဖြူရောင် Color Tone တွေနဲ့လည်း အရမ်းလိုက်ဖက်ပါတယ်။
၂၀၂၀ ရဲ့ Hot အဖြစ်ဆုံးကာလာဖြစ်ပြီး Fashionista Aesthetic Vibe ကို အပြည့်အဝပေးနိုင်ပါတယ်။ သူရဲ့ အရောင်ပြေးက မိတ်ဖက်ကာလာတွေဖြစ်တဲ့ Mint Leaf ၊ Soft Yellow ကာလာတွေနဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ Fashion Mood ကိုလည်း အများကြီးမြှင့်တင်ပေးတဲ့ အရောင်လေးဆိုလည်းမမှားပါဘူး။
ဒီ Powder Blue ကာလာကတော့ အသက်အရွယ်မရွေးနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ Color Tone လေးပါ။ ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်အပြင်အဆင်နဲ့လိုက်ဖက်ပြီး Summer ရဲ့ Signature Color လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ သူက Baby Blue ထက်နည်းနည်း ပိုဖျော့ပြီး မီးခိုးရောင်ဘက်နည်းနည်းသန်းပါတယ်။
Minimalist စတိုင်တွေကိုမှ ကြိုက်တယ်ဆိုသူတွေအတွက် Beige/Nude ကာလာအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ Mushroom ကတော့ ဘယ်လို Occasion အတွက်ပဲဝတ်ဝတ်သင့်တော်ပါတယ်။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရိုးရှင်းသလို တခြားဘယ်အရောင်နဲ့တွဲဝတ်ဝတ် Match ဖြစ်စေမှာပါ။
အနာဂတ်ကမ္ဘာထဲက ဖက်ရှင်အငွေ့အသက်တွေပါဝင်လာတဲ့ Fall 2020 London Fashion Week
Futuristic ဆန်ဆန်ဖက်ရှင်တွေကို Ready To Wear အနေနဲ့ ဖန်တီးလာတာဟာ ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းအသစ်တစ်ခုရဲ့ အစလေလား
ဖက်ရှင်ချစ်သူတွေ အမြဲစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြမြဲဖြစ်တဲ့ Fashion Week ပွဲကြီးတွေထဲကမှ London Fashion Week ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ရက်ကနေ ၁၈ရက်နေ့အထိ လေးရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲကြီးမှာ ကမ္ဘာကျော် ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတွေနဲ့ ကမ္ဘာကျော် အမှတ်တံဆိပ်ပေါင်းများစွာပါဝင်ပြသခဲ့ကြပြီး ဒီနှစ်ရဲ့ Fall Season အတွက်ကို highlight လုပ် ဖန်တီးခဲ့ကြတာပါ။ အားလုံးရဲ့ မတူညီတဲ့ Taste တွေ ကွဲပြားတဲ့ဖန်တီးမှူတွေကြားမှာ ထူးထူးခြားခြား မြင်တွေ့ရတာကတော့ Central Saint Martins MA Fashion ရဲ့ Ready to Wear Collection ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Central Saint Martins ဆိုတာ London ရဲ့ အထင်ကရ အနုပညာတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တာနဲ့အညီ သူရဲ့ လက်အောက်ဖြစ်တဲ့ MA Fashion က လက်ရာမြောက်တဲ့ Ready to Wear Collection တွေကို London Fashion Week ရဲ့ Runway ထက်မှာ ထူးထူးခြားခြား တင်ဆက်ပြသသွားခဲ့ပါတယ်။ Straight Line လေးတွေပါတဲ့ Fabric Texture နဲ့ ဆန်းပြားတဲ့ အရောင်အတွဲအစပ်တွေကိုပေါင်းစပ်ပြီး Futuristic ဆန်ဆန် ဝတ်စုံတွေနဲ့ Puffy ဖြစ်တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကိုမှ Head Gear ခပ်ဆန်းဆန်းတွေ ၊လက်အိတ်တွေ ၊အရမ်းမိုက်တဲ့ ထပ်ချွန် Heelတွေ ၊ Men Shoe တွေနဲ့ ခေါင်းအစခြေအဆုံး အသေးစိတ်ဖန်တီးထားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။
အခုလို အနာဂတ်စိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲက ဖက်ရှင်ဆန်ဆန်ပုံစံမျိုးတွေကို အမိုက်စားဖန်တီးတတ်တဲ့ MA Fashion ရဲ့ လက်ရာတွေနဲ့ London Fashion Weekရဲ့ အရှိန်အဝါတွေကြောင့် ဒီလို Futuristic ပုံစံ Inspired ယူထားတဲ့ဖက်ရှင်တွေဟာ Trend တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီး ခေတ်စားလာဦးမလားဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ရမယ့်အရာတစ်ခုပါပဲ။
#Central Saint Martins MA Fashion
Emporio Armani ရဲ့ Fall Winter 2020 Collection Runway ပေါ်က ပုံရိပ်များ
ဒီနှစ် Armani ရဲ့ Fall / Winter trend ကတော့ ရဲရင့်မှူနဲ့တည်ငြိမ်မှူကို ပေါင်းစပ်ထားပုံပါ
Giorgio Armani တို့ Armani Exchange တို့လိုပဲ Armani ရဲ့ label ခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Emporio Armani ကလည်း ဒီနှစ်ရဲ့ Milan Fashion Week Men's Wear Show မှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Color tone နည်းနည်းနဲ့ minimalist ဖြစ်တဲ့ဘက်ကို အမြဲအသားပေးတတ်တဲ့ EAက ဒီနှစ် Fall Winter အတွက်ကိုလည်း ရဲရင့်မှူနဲ့ တည်ငြိမ်မှူကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ Red And Grey color tone နှစ်ခုကိုအဓိကပေါင်းစပ်ပြီး Futuristic ဖြစ်တဲ့ look ဘက်ကိုအားသာထားတာတွေ့ရပါတယ်။ 2020 Milan Fashion Week ရဲ့ Runway ပေါ်မှာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ဆွဲဆောင်အားပြင်းနေတဲ့ Emporio Armani က 2020 ရဲ့ တခြား Season တွေအတွက်ရော ဘယ်လိုထူးခြားတဲ့ trend အသစ်တွေကို ဖန်တီးလာဦးမလဲဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
COMFORT ဖြစ်ပြီး STYLISH ဖြစ်တဲ့ LOAFER SHOE လေးတွေ
သင့် Outfit လေးကိုပိုပြီးပြည့်စုံစေဖို့ Loafer လေးနဲ့တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ကြရအောင်
သင့်ရဲ့ outfit ကိုခေတ်မှီပြီးအထာကျကျလေးဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Trends ဖြစ်နေတဲ့ item လေးတစ်ခုလောက်တော့ပေါင်းထည့်စေလို ပါတယ်။2029 trends item တွေထဲက loafer shoe လေးကိုလူငယ်ဆန်ပြီး ခပ်မိုက်မိုက်လေးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဝတ်နေကြလည်းဆိုတာ sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ Loafer shoe ဆိုတာကြိုးမပါတဲ့ slip-on shoe အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးထိုးထည့်လိုက်ယုံဘဲမို့အလုပ်မရှုပ် heavy မဖြစ်တဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး casual shoe လေးပါ။Classic suit တွေနဲ့လည်းတွဲဖက်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတဲ့ American culture shoe ကိုအခုဆိုရင်ပုံစံဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့ ကမ္ဘာကျော် Brand တွေကထုတ်လုပ်ရောင်းချလို့လာပါတယ်။ blazer coat ကို Loafer shoe ကိုသာသင်ဝတ်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်သေချာတာကတော့သင့်ရဲ့ဖက်ရှင်ကအဆင့်တန်းရှိရှိနဲ့မိုက်နေမှာအမှန်ပါ။ ရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံကစလို့အမွှေးအမျှင်ဒီဇိုင်းအမိုက်စားတွေထိမြင်တွေ့နေရတဲ့ loafer shoe ကို skinny jeans ၊ boyfriend jeans ၊ short pant ၊ flare Pant စတာတွေနဲ့တွဲဖက်ဝတ်ဆင်နိုင်သလို style pant ၊ skirt ၊dress တွေနဲ့လည်းဝတ်ဆင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်နဲ့လည်းအထူးသင့်တော်တဲ့ဖိနပ်ပုံစံလေးပါ။ ကျား ၊ မ အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေလိုက်ဖက်တဲ့ဖိနပ်လေးမို့ဒီဖိနပ်လေးကသင့် outfit ကိုပိုကြည့်ကောင်းစေမှာပါ။
တကျော့ပြန်ဖန်တီးပုံဖော်ထားတဲ့ ၁၉၄၀ ဝန်းကျင်ကခမ်းနားတဲ့ jewelry style
ဒီနှစ်မဟုတ်ဘဲနောက်နှစ်ထဲထိရေပန်းစားလာနိုင်မယ် ႔အမိုက်စား Jewelry လေးတွေက...
2019 / 2020 Fall Winter Runway Show မှာတွေ ႔ မြင်ခဲ့ရတဲ့အမိုက်စား Jewelry တွေကအားလုံးရဲ ႔အမြင်ကိုဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် ၂၀၁၈ လောက်ကတည်းကခေတ်စားခဲ့တဲ့ Jewelry အကြီးကြီးတွေကအခုတိုင်ကျန်ရှိလို့နေပါတယ်။ ပုံမှန်ထက်ပိုကြီးနေတဲ့ လည်ဆွဲ နားကပ်စတာတွေကိုအရမ်းမိုက်တဲ့ဖက်ရှင်နဲ ႔ တွဲဝတ်ပြီးအားလုံးရဲ ႔အာရုံကိုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ Jewelry Trends လေးအကြောင်းဆက်ပြောပြချင်ပါတယ်။ လည်ဆွဲ နားကပ် လက်စွပ်လို ့ဆိုလိုက်တာနဲ ႔ပါးပါးမျှင်မျှင်လေးတွေသာဝတ်တတ်တဲ့အလေ့အထကိုမေ့ပစ်လိုက်ပါ။ Haters တွေဆီကနေသင့်အကြောင်းမကြားရစေလောက်အောင်ကြီးတဲ့နားကပ်မျိုးတွေကို ဒီနှစ်အတွက်သာမကလာမယ့်နှစ်အတွက်ပါရေပန်းစားနေဦးမယ်ဆိုတဲ့အရိပ်အမွတ်ကို ကမ္ဘာကျော် Brand ဖြစ်တဲ့ Dolce and Gabbana က Runway တစ်လျှောက်သက်သေပြလို ႔သွားပါတယ်။ မိုက်တယ်ဆိုတာထက်ပိုတဲ့ဒီဇိုင်းတွေနဲ ႔ခမ်းနားတဲ့ Jewelry တွေက၁၉၄၀ လောက်ကဒီဇိုင်းတွေကို inspired ယူထားတာဖြစ်ပြီး ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ကျောက်မျိုးစုံကိုသုံးပြီးဒီဇိုင်းဖန်တီးထားတာကဆိုရင်တကယ်ကိုတော်ဝင်ဆန်ပြီးခမ်းနားလွန်းပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့လည်စွဲနဲ ႔နားကပ်ကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့အပြင်သူတို ႔ရဲ ႔ဆံပင်ကို headband ပန်းပွင့်အကြီးကြီးတွေကိုဦးခေါင်းမှာအလှဆင်ကြတာလည်းတွေ ႔ရပါတယ်။ ဒါကလည်း ၁၉၄၀ နောက်ပိုင်းအထင်ကရဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖက်ရှင်လေးတွေပါ။ ဒါကိုပြန်လည်ဖန်တီးပုံဖော်ထားတဲ့ 2019/2020 jewelry trends ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်၂ဝရာစုအရှေ့ပိုင်းအမျိုးသမီးထုရဲ ႔ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့လက်ဝတ်လက်စားဝတ်ဆင်ပုံတွေကိုသိမြင်ခံစားနိုင်မယ်လို ႔ထင်ပါတယ်။ ဒီနှစ်သာမကနောက်နှစ်ထဲထိပါရေပန်းစားနေဦးမယ့် ခမ်းနားလှတဲ့ Jewelry Trends ကိုကြည့်ပြီးမိမိုက်နေတဲ့ပွဲတက်ဖက်ရှင်မျိုးဖန်တီးနိုင်ပါစေနော်။